Nagu saabsan - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
COMI AROMA waa shirkad soo saarta baakadaha oo lagu aasaasay magaalada Shanghai, Shiinaha sanadkii 2010. Xarunta dhexe ee magaalada Shanghai, Warshada ku taal magaalada Xuzhou, Shiinaha. Tan iyo markii la aasaasey, waxaa si fiican naloogu yiqiin Alaabada Muraayadaha Sare, si kastaba ha noqotee maanta, oo marin u helno in ka badan 25 foornooyin, waxaan la jaan qaadi karnaa amarrada dhammaan qaababka, cabbirka, iyo midabbada ee mugga weyn sanadka oo dhan. Tani waxay awood noo siineysaa inaan u adeegno warshado badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin qurxinta, faafiyaha, barafuunka, tuubada dhalada, iyo dawooyinka, iyo dhalada wasakhda ah. Waxaan xaqiijineynaa in labadeenna shay iyo alaabteenaba ay yihiin kuwo lagu soo saaray heerarka tayada ugu sarreeya isla markaana si joogto ah looga heli karo Amber, Green, Flint, iyo Cobalt Blue.
Gaar ahaan, COMI AROMA waxay siisaa dhalooyin quraarado ah, weelal, iyo qalab dheeri ah oo go'an (koofiyadaha wax lagu rito, bambooyin ceeryaamo, bambooyin lagu buufiyo, caraf udgoon Fiber, ulaha rattan, kuwa joojiya iyo koofiyadaha). Iyadoo ku dhowaad tobaneeyo sano oo waayo-aragnimo ah ku leh warshadaha baakadaha, waxaan bixinnaa alaabooyin wax soo saar oo tayo sare leh oo casri ah oo loogu talagalay quruxda adduunka iyo noocyada daryeelka maqaarka.
Dhamaan xarumaheena wax soo saarka casriga ah, waxay u hogaansamaan heerarka Mareykanka waana US FDA oo la aqoonsan yahay sidaa darteed waxaan awoodnaa inaan la kulanno baahiyaha macaamiisha gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, COMI AROMA waxay qaadatay tiknoolajiyada kuleylka dhammaadka kulul, tiknoolajiyada buufinta dhammaadka qabow, iyo tikniyoolajiyad daaweyn heer sare leh oo silikoon leh. Bakhaarkayaga 100,000 + kiiloo mitir laba jibbaaran oo aan ku keydinayno in ka badan 50 milyan oo unug oo alaab ah si loo hubiyo qanacsanaanta degdegga ah ee macaamiisha iyo in la ilaaliyo waqtiyada gaagaaban ee gaagaaban.
Maaddaama ay 'COMI AROMA' sii kordheyso, waxaan ku dadaalnaa sidii aan u buuxin lahayn baahida macaamiisha.
Safar Baakad Raaxo Leh, Shaqada Farxada Leh Ee COMI AROMA!
Fadlan nala soo xiriir wixii su'aalo ah.